+ – x ? | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← ဂ်ပန္ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးသပ္ခ်က္
September 19, 2009 · 7:36 am
+ – x ?
ဦးပဇင်း ဝတ်စဉ်က ကျောင်းမနေဖူးတဲ့ ကိုရင်တွေ စာခေါ်သင်ပေးတယ်။ သုမနဆိုတဲ့ ကိုရင်ကြီးဟာ အသက်သာကြီးတယ်၊ အင်မတန် ထုံတယ်။
“ဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူ အကြီးဆုံးလဲ“ဆို “ခင်ညွှန့်“တဲ့၊
“လ ကဘယ်မှာတုန်း“ဆို “ကမ္ဘာထဲမှာ” တဲ့၊
အဲလို ကိုရင်ကြီး၊ အသက်က ၁၆ နှစ်လောက် ရှိနေပြီ။
စာချကိုယ်တော် ဦးတေဇနိယက သူ့ကို “စုံထောက်“လို့ ခေါ်တယ်။ ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်။
တနေ့ သင်္ချာသင်တယ်။ သင်္ချာမှာ လေးမျိုးရှိတယ်၊ ပေါင်း နှုတ် မြှောက် စား ပေါ့။
သူမှတ်မိအောင် ဆွမ်းဟင်းခွက်တွေ ချပြီး ဒီလို ရောတာ ပေါင်းတာ၊ ဒီလို ခွဲထုတ်တာ နှုတ်တာဆိုတာ ပြရတယ်။
ကဲ ဒါနဲ့ ဆိုရင်းကို နောက်ရှင်းမယ်၊ စားတယ်ဆိုတဲ့ အမူအယာနဲ့ မှတ်ဆိုပြီး ပြရတယ်။
ဒီမြန်မာစကားလုံးလေး ၄ ခုကို သူမှာ မေ့မေ့နေတယ်။
“ကိုင်း … သင်္ချာမှာ ဘယ်နှမျိုးတုန်း” ဆိုတော့ “၄ မျိုးပါဘုရား“တဲ့။
ဟုတ်နေပြီ။ “ကဲ ဘာတွေတုန်း” ဆိုပြီး ဆက်မေးတယ်။
“နောက်တော့ကော” ဆိုတော့လည်း ဆက်မဖြေနိုင်ဘူး။
ဒါနဲ့ ဘော်ဒီလန်းဂွေ့နဲ့ ပြရတော့မယ်ပေါ့။
စားတဲ့ ဟန်လုပ်ပြတယ်။ ဖြေလိုက်ပုံက ..
“အမြည်း” တဲ့ …
ကျုပ်ရော ကုတင်ပေါ်က စာမှောက်ဖတ်နေတဲ့ သိမ်ကျောင်းကိုယ်တော်ပါ ရယ်လိုက်ရတာ အူတွေ နာလို့။
4 responses to “+ – x ?”
ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ကိုရင္ႀကီးပါလား… ကိုရင္ႀကီးဆရာေရ… 😀
လာ မွတ္ သြားတယ္ ဗ်ာ။ေက်းဇူး
ကိုရင္ၾကီး ကိုရင္ၾကီး ဂလုိကုိ